Ọkụ - Ngwọta Ahụ Na Ọgwụ | Ọkọwa Okwu Ahụike
Ọkụ - Ngwọta Eke na Ọgwụ
Clifford Nwere ike 17, 2019
Soro anyi na Pinterest
Ihe Nchọpụta AZ Họrọ Atiya Ezigbo Acid / alkaline Acid Reflux Acidosis Acids na Alkalis Ihe otutu Isotretinoin ọgwụ ọjọọ Ọkpụkpụ Acne Actinic Keratosis rụọ ọrụ Acupressure Acupressure Maka ụkwara ume ọkụ Acupressure Relief igba okpukpu Ọgwụ acupuncture Maka ashma Ọgwụ acupuncture maka ọmụmụ Ọgwụ acupuncture Ịṅụ ọgwụ ọjọọ Adrenal Glands Ọgbọ Afọ Ikuku mmanya Ọrịa Rhinitis Mmekorita Nkà Ọgwụ Alzheimers '/ Dementia Aria / oria Ọgwụ anaemia Iwe Ntughari Ant Agụ Agadi Ọgwụ nje Anti Fungal Mpempe mgbochi Ọrịa mgbochi Ọgwụ nje antioxidants nchegbu Appendicitis Odide Ntụkwasị aromatherapy Aromatherapy & ịhịa aka n'ahụ Ọrịa akwara ogbu na nkwonkwo ogbu na nkwonkwo mgbu Ọrịa ogbu na nkwonkwo Asbestosis Ọrịa Aspartame Aspartame Nutrasweet Alert ụkwara ume ọkụ Ashma na Ima ima ọgwụgwọ ụkwara ume ọkụ sitere n'okike Ọgwụ Asthma Kwụ Onye Ọga Autism Ọrịa Na-eme Onwe Gị Azụ Mgbu Azụ mgbu kwụsị Surgerywa ahụ mgbu azụ Nje bacteria Ihe nje Ihu ojoo Icheta Ihe ojoo Ihe ndina Nwa Ewu Nwa Ewu Inu Ọria ọbara Circulation Ọbara Ọbara Ọbara Ọbara Isi Oduu Isi Oduu Ahụ mgbu Obụpde ọkpụkpụ Mee ka ike gị dịkwuo elu boron Elsta Ọrịa Brain Njikwa ike ụbụrụ Ọkpụkpụ Brain Agbaji ngwa ngwa ara Cancer Ọrịa afọ Burns calcium cancer Candida Canker Sores Ọrịa obi Cataracts Cavities CBD CBD Oil Ngwaahịa CBD Ekwentị mkpanaaka Treatmentzọ Ọgwụgwọ Cellulite Chafing Kịtịkpa cholesterol Ike ọgwụgwụ Oyi / Oyi Ọkụ Na-egbu Ahụ Ọrịa colitis Collagen Silver Coloidal Colloidal Silver na Flu Colloidal Silver na Nje Virus Colloidal ọlaọcha Maka anu ulo Colon Cleansing mkpọchi ntachi Hypnosis Mkparịta ụka COPD - Ọrịa Pulmonary Ọrịa na-ala ala Coronavirus Ahụ ụkwara Covid19 Ọrịa Crohn Ọrịa Insomnia Acystic Acne Cysts Nri-Rich Rich Ọchịchị gbara agba gbara anya Nkwenye Ahụ ọkụ Dengue Ụkwụ ịda mbà n'obi Detox / Detoxification Diabetes Diaper Rash afọ ọsịsa nri Diverticulitis Drugs Ọrịa Dyspepsia Ọrịa na-amalite Nsogbu ndị na-eri nri ED Edema Nchịkwa Elite Social EMF Ndị na-akpata ọgba aghara Endocrine Endometriosis Energy Akwụkwụ na-adọ Ọrịa Epstein-Barr Erectile Dysfunction Mmanụ dị mkpa Cess Dụbiga mmanya ókè Anya Anya Anya Anya Anya Anya anya Anya - Mbelata nku anya Anya - Iweghachi Anya Nkịtị ihu Iche Nkpuchi Ihu Ihu Ndị ama ama Na-ebu ọnụ Ọdọ abụba Obi erughị ala Ahụ ọkụ Fibroids Fibromyalgia Azụ Ahụ Azụ Fleas Mmiri Flu And Colloidal Silver Fluoride / Fluorosis Nri na ashma Nri nri Ajụjụ Erimeri Nri Nri Nchekwa nri Nri Ka I Zere Odkwụ Odor / Ọkpụ ụkwụ Mkpochasị akwụkwọ / ihe ịchọ mma Radicals n'efu mkpụrụ Mkpụrụ ijiji Gall Bladder Nkume Gall Gas / Gastritis Gastric Band Hypnotherapy Genital Herpes Gingivitis Ginseng Glands Ọgwụ Glioblastoma Nri GMO Gout Ọrịa ili Hair Agba ntutu / Agba Halitosis Hay fever isi ọwụwa Ugbo ala ndi aru ike Nlekọta ahụike Ọgwụ Ahụike Ndụ Ahụike Iri nri Ọrịa Obi Ahụ́ ike na-adị mma Ọkụ obi nro ịba ọcha n'anya Ọgwụ Ọgwụ herbs herpes Mmeghachi azụ nke Herxheimer Ọbara mgbali elu HIV Golọ Gout Remedies Homeopathy Hormones Nje Virus Papilloma nke mmadụ (HPV) Mmiri Hydration Mmiri Osisi hydrogenated ọbara mgbali Hyperthyroidism Asambodo Hypnosis Ọgwụ Hypnosis Hypnosis Maka Ibu Arọ Hypnotism Modulator anwụ Monde Mmetụta impetigo Nri mbufụt ehighị ụra nke ọma Ibe Ígwé Ọrịa Bowel na-adịghị mma Itching (Pruritus) Onyinye Jean Corsan Jock Itch Mkpakọrịta Iri Oriri Keratosis Ketogenic Diet Ọcha akụrụ Akụrụ Ọrịa Iwu Na Ckwụ .kwụ Leishmaniasis Nri Lemọn Nri Lemọn Ọrịa Ike ndu Umeji Imeju nhicha Mgbaafọ Ọrịa Imeju Ọrịa Umeji Lee nwata Ilele Oge Nri Lupus Ọrịa Lyme magnesium Igwe Ọdụdọ na ịba ịhịa aka n'ahụ Ahịa Massage Ọgwụgwọ Ọhịa Master Isi Iche Menopause Ọrịa ụbụrụ Golf Uche Mental Health Isonnyịnya Mercury Mesothelioma Metabolism Microglia Obere Microwave Migraine Nzuzo Mind Mobile ekwentị mkpanaaka na Mononucleosis Nappy Rash Eke Ahụike & Ọgwụ Ọgwụ Ngwọta Obi & Ọgwụ Ọgwụ - A to E Ngwọta Obi & Ọgwụ Ọrịa - G ka L Ngwọta Obi & Ọgwụ Ọgwụ - M ruo S Eke Ogwurugwu & Ulo Ogwurugwu T to Z Ahụike Na-adịghị Ọgwụ herbal Ọgwụ Ahụike Dịịrị Maka Isi Ọwụwa Ọgwụ Ahụike Maka Migraines olu mgbu Neurodegeneration opioid Ojiji Opioid Na Uche Ops Hypnosis Osteoarthritis osteoporosis Ahụhụ ahuekere Peripheral Edema Pitting Edema Ọbara Ọbara adịghị Nrụgide Ọ na-akpata Nrụgide Ulcers Nchekwa Nri Kwesịrị Ekwesị Ọcha ọcha qigong Kwụsị ise siga Ezi ntụziaka Nsogbu iku ume Rheumatism Arthritis Rheumatoid Brain Ọgaranya Roman Chamomile Mkpa mmanụ ọdịdọ Sex Inwe Mmekọahụ Mgbe Mkpebi SFM D-Cal Boron Ngwaahịa SFM SFM ọla edo ọcha SFM Siaga Skin Nlekọta anụ ahụ Ikwu nri ụtụtụ Nchegbu nke Onwe Ugbo ala Solfoggio Ngwọta nke ehighị ụra nke ukwuu Ọrịa ime mmụọ Ọgwụ Hypnosis nchegbu Iri imi Ihe ịga nke ọma nke ọma Ịwa ahụ ọzịza Kinggwa M Onwe M ezé testosterone Enyemaka nke atọ Akara Hypnosis Titanium Ire ere Ogbu na nkwonkwo ụkwụ Hypnosis ntụgharị Ifufe Na-agbada Eziokwu Banyere Ọgwụ Tumor Uncategorized Fibroids Uterine malitere ịrịa Nje Virus Mmetụta Anya vitamin mmiri ibu Loss Achịcha ọka WiFi Ibu Na-echegbu onwe gị Ogbugbu Yist
1 Ihe Nchọpụta AZ
2 Ahụmahụ nwanyị nwere n'ọkụ:
3 Ahụmahụ m nwere:
4 Njikọ posts:
Ọkụ na-esite n’anyanwụ, radieshon, ụzarị ọkụ, ọkụ, ọkụ, yana site na kemịkal ndị ọzọ dị na gburugburu anyị. Pure ọla ọcha dị ezigbo mma mgbe ejiri ya na-agwọ ọnụnọ. Ọ na-ebelata ihe mgbu na mbufụt ma na-edozi ọgwụgwọ ọnya. Enwere ike fesaa mmiri ọcha dị ọcha n'ọkụ ahụ ma ọ bụ jiri ya kpoo oku ahụ. Mbelata dị ukwuu na mgbu, ọnya na mmebi anụ ahụ ga-apụta n'oge elekere mbụ.
Bido Azụmaahịa Onlinentanetị Gị Ọhụrụ Taa!
Ọcha ọcha ga-abanye ọnya ahụ ọsọ ọsọ wee gbuo bacteria na - ebute ọrịa, ịchafụ na - egbochi ọgwụgwọ, mana ekwesịrị ịmaliteghachi ya elekere ọ bụla. Were 1-2 droppers nke Lọ ahịaFreeMart PureSilver 3x kwa ụbọchị ruo mgbe ọkụ na-apụ.
ShopFreeMart PureGold na - enyere aka rụkwaa DNA, nke na - enyere aka imepụtaghachi mkpụrụ ndụ niile nke dị na ahụ nke ọma gụnyere ọkpụkpụ, utara, mọzụlụ, anụ ahụ, akwara. Siaga na-enyekwa aka nke ukwuu na nhazi sel.
Ahụmahụ nwanyị nwere n'ọkụ:
N'oge ụfọdụ gara aga, m na-esi ọka, rapaara ndụdụ m n'ime mmiri ọ boilingụ toụ iji hụ ma ọka ahụ adịla njikere. Agbaghara m na aka m banye na mmiri esi. Otu enyi m, onye bụ onye Vietnam bụ veti, batara n'ụlọ, dịka m na-eti mkpu ma jụọ m ma enwere m ntụ ọka ochie. M bupụtara akpa wee tinye aka m na ya. Ọ gwara m ka m tinye aka m na ntụ ọka maka nkeji 10 nke m mere. O kwuru na na Vietnam, enwere otu nwoke na-ere ọkụ ma na ụjọ, ha tụfuru akpa ntụ n’elu ya iji wepụ ọkụ. Ka ọ tụgharịrị, ọ bụghị naanị itinye ọkụ ya, mana ọ nwetụghị ọnya.
Ogologo akụkọ dị mkpụmkpụ, etinye m aka m n'ime akpa ntụ ọka maka nkeji 10, dọpụta ya na enweghị akara uhie ma ọ bụ ọnya na kpamkpam PAIN. Ugbu a, ana m edebe obere ntụ ọka na friji ma oge ọ bụla m na-agba onwe m ọkụ, ana m aga maka ntụ ọka ahụ. Achọpụtakwara m na ntụ ọka “oyi” na-adị m mma karịa n’ọkụ karịa ntụ ọka n’ime ụlọ ebe a na-anọ eri nri.
Tugharia Weebụsaịtị Gị N'ime Asụsụ 100
Ana m eji ntụ ọka ahụ ọtụtụ oge ma enwetụbeghị ONCE nwere ntụpọ uhie, ọnya ma ọ bụ ọnya! Egburu m ire m otu oge, tụnye ntụ ọka na ya ihe dị ka nkeji 10; mgbu ahụ agaghị anyụ anyụ.
BTW, agbakwala mpaghara mpaghara ọkụ gị n'okpuru mmiri oyi; naanị tinye ya n'ime ntụ ọka maka nkeji 10. Debe akpa ntụ ọka na friji gị ma ị ga-enwe obi ụtọ na ị mere!
Ahụmahụ m nwere:
N'afọ ndị gara aga, nwa m nwanyị dị afọ ise nọ na-anwa iwepụ mmiri esi na stovu ma wụsa ya n'ubu ya na ala ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nnukwu akpụkpọ ahụ dị ihe dị ka sentimita 9 n'obosara gbapụrụ site n'obi ya. Ọ nọ n'oké ihe mgbu na ihe nkịtị ga - eme bụ iji ọsọ kpọga ya n'ọnụ ụlọ mberede.
Kama anyị etinye mmanụ alkaline ịnweta gel iji wepu ihe mgbu "acid". Ozugbo mgbu ahụ belatara ma na-esote ụbọchị, ọ nweghị ihe mgbu ọ bụrụhaala na ọ naghị emetụ ya aka. N'ime izu abụọ, ọ were ọfụma gbakee kpamkpam, enweghịkwa ọcha.
Na “alkaline” mineral dị na ngwaahịa anyị ji mee ihe, wepụrụ acid ahụ nke na-eme ka ihe mgbu na-esochi ọkụ ma na-egbukwa nje ọ bụla nwere ike ibute ebe a na-ere ọkụ, nke nyere mpaghara ahụ ohere ịgwọ ngwa ngwa, na-enweghị ncha.
Ogbugbu - Ogwu na Ogwugwo
Ihe na Burnsakpado ọkụ, gbaa ọnya, ọkụ, kemịkalụ ọkụ, ọkụ, ire anụ, radieshon na-enwu, anwụ anwụ
Ọrịa nkwonkwo - Ọgwụ Ọgwụ na Ọgwụ
Ọrịa Cancer - Ọgwụ Ọgwụ na Ọgwụ
Ụlọ ọrụ a na-echebe site na reCAPTCHA na Google amụma nzuzo na Okwu nke Service tinye.